Al-Shabaab oo weeraray Qansax-dheere gaarina ku gubay Buula-mareer ?
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya, weerar xalay fiidkii Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidanka Maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen degmada Qansax-dheere ee gobolka Baay.
Ilo xog ogaal ah oo soo xiganaya saraakiil dhinaca Millitariga ah ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku geeryoodeen laba ka mid ah ciidankii ku sugnaa fariisinka, halka ay ku dhaawacmeen laba kale.
Saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa inoo sheegay inaanay jirin khasaare buuran oo weerarkaasi ka soo gaaray ciidankooda, waxayna tilmaameen in lagu daba jiro raggii weerarka ka geystay degmada Qansax-dheere.
Shabaab weli wax war ah kama aanay soo saarin weerarkan ay xalay ku qaadeen fariisin ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen degmada Qansax-dheere ee gobolka Baay.
Waxaa muuqata in Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyada oo Koonfur aysan weli jawaab muuqata ka bixin weerarada Shabaab.
Al-Shabaab oo Go'doomiyay degmada Balad-Xaawo
47 jir ka mid ahaa raggii Weeraray Hotelka Saxafi
Rag lagu Eedeeyey Daacish Iyo Al-Shabaab oo xukun lagu Riday!!
US airstrikes fail to weaken Al-Shabaab's grip on Somalia
Baar Maraykanka ku yaalla oo la weeraray!
NISA oo Howlgal Ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay Sh.Hoose
Jubbaland administration to restore operations against Al-Shabaab in the region
Dagaal Toos Ah iyo Madaafiic Lagu Weeraray Degmada Afgooye
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 33167
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28035
Graham vows probe after McCabe interview on Trump Visits: 52
Ethiopia oo Wiil Adeer Uyahay Xildhibaan Ibraahim Yerow Baydhabo Ku Dishey Visits: 92
Kenya oo Sharuudo Ku xirtay Soomaaliya Visits: 15